ယူအေအီး Rak / LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူအေအီး Rak / LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကယူအေအီး Rak / LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီတရားဝင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအောက်မှာ operating တစ် Ras Al-Khaimah လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအဖြစ်လူသိများသည် (ယူအေအီး) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုမ္ပဏီများဥပဒေ။ နိုင်ငံခြားသားများကိုသာရှယ်ယာ 49% ကိုပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်နေဆဲကုမ္ပဏီထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်အမြတ်အစွန်းများ% 90 အထိရယူနိုင်တော့မည်နိုင်ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်များကိုနိုင်ငံခြားမိတ်ဖက်အတွက်အပ်နှင်းနိုင်ပါသည်။ ဘေးထွက်သဘောတူညီချက်များလူနည်းစု partner ၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အများစုမိတ်ဖက် (ယူအေအီးအမျိုးသားရေး) နှင့်နိုင်ငံခြားလူနည်းစုမိတ်ဖက်များအကြားကွပ်မျက်ခံရနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ RAKICC စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများစည်းမျဉ်း 2016 အဆိုပါ Rak အတွက်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖျက်သိမ်းအုပ်ချုပ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများမဆိုအမျိုးအစားတစ်ဦး LLC တို့ကကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
ခုနစျပါးလွတ်လပ်သောဖက်ဒရယ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုတက်စေပါ။ ရိုးရှင်းစွာအကပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့တွင်တည်ရှိသည်က "စော်ဘွားများ" အဖြစ်လူသိများ။6နီးပါး 1 တစ် margin ကကထက်ယူအေအီးမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံး၏အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုမှ ပို. ပြည်တော်ပြန်ရှိပါတယ်။ ယူအေအီး 1971 အတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ မကြာမီတွင်သောနောက်, ခုနစျပါးလွတ်လပ်သောစော်ဘွားတစ်ဦးစုစုပေါင်းယူအေအီးတည်ထောင်ရန်တပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အမ်းမရိတ်၏နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံဖက်ဒရယ်ဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Ras Al-Khaimah (Rak) ဒူဘိုင်းရန်အလွန်နီးကပ်တည်ရှိပြီးနှင့်အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာယူအေအီးစော်ဘွားတဦးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Rak အခွန်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတင်း, လင်းမြင်သာမှု, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအခမဲ့မရှိအနီရောင်တိပ်ရှိပါတယ်, နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ထိရောက်သောကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ယူအေအီး Rak လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကယူအေအီး Rak လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမျိုးအစားများရှိနိုင်သည်
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: ယူအေအီးပြင်ပက၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးလုပ်နေတာအသုံးပြုပုံတစ် LLC မျှအခွန်ပေးဆောင်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ရှယ်ယာရှင်များ '' အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: တစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုအပြည့်အဝမြို့တော်အလှူငွေဖို့ကန့်သတ်သည်။
• အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း: LLC သည်နှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
• နှစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်များမှာ: နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံး
• အနိမ့်နိမ့်ဝေမျှမယ်မြို့တော်: သာ $ 1,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာလိုအပ်ပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: တရားဝင်ဘာသာစကားမဟုတ်ပေမယ့်, အင်္ဂလိပ်ကျယ်ပြန့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ယူအေအီး Rak လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အမည်
တစ်ဦး LLC ၏နာမတော်ကိုပြီးသားတစ်ဦးယူအေအီးကုမ္ပဏီအသုံးပြုသောတဦးတည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
ကုမ္ပဏီနာမည်ရဲ့အဆုံးမှာအသုံးပြုရန်နောက်ဆက်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားနှင့်အညီဖြစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့်, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ၏အမည်ကို "LLC" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
တစ်ဦး LLC များအတွက်အသုံးပြုသည်
•ချေးသို့မဟုတ်ချေးငွေ, ကော်မရှင်နှင့်အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson ကိုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ပေးဆောင်;
• client များအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှု၏နောက်ထပ် layer ကိုပေးခြင်း, နှင့်
သစ်တစ်ခု LLC များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Ras Al-Khaimah ဦးစီးဌာနမှတင်သွင်းထားတဲ့လျှောက်လွှာနှင့်အတူလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလျှောက်လွှာနှင့်အားလုံးထောက်ပံ့စာရွက်စာတမ်းများအင်္ဂလိပ်နိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီများသာမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးက LLC နှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်း Rak အတွက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်လျှောက်ထားသူအပြည့်အဝမြို့တော်တစ်ယူအေအီးဘဏ်သို့အပ်နှံခဲ့ကွောငျးသကျသပွေရမည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ Ras Al-Khaimah ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်ရန်ပုံငွေများဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်။
အားလုံးရှယ်ယာရှင်များ '' liabilities သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်ဘို့မိမိတို့မရတဲ့ပမာဏကန့်သတ်ထားပါသည်။
နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးတစ်ဦး LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များအများဆုံး 50 ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးနိုင်ငံသားများစုစုပေါင်းရှယ်ယာ 51% ကိုင်ထားရပေမည်။ အမြတ်အစွန်း 90 နိုင်ငံခြားလူနည်းစုရှယ်ယာရှင်များအဘို့% နှင့်ယူအေအီးနိုင်ငံသားရှယ်ယာရှင်များအဘို့အ 10% အထိပေးအပေါ်သို့သဘောတူညီခဲ့နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဥပဒေမိတ်ဖက်များအကြားဘက်သဘောတူညီချက်များအဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဥပမာ, တဦးတည်းသဘောတူညီချက်နိုင်ငံခြားမိတ်ဖက်အပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်များရှိလိမ့်မည်ဟုပေးနိုင်ပါသည်။
အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာတစ်ဦး LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါဒါရိုက်တာနိုင်ငံသားများဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒေသခံဒါရိုက်တာများမလိုအပ်ပါ။
လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် $ 1,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာမြို့တော်ထုတ်ပေးနှင့် paid ခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာမဆိုငွေကြေးထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Rak LLC ရဲ့အပေါ်အခွန်မဆိုအမျိုးအစားစည်းကြပ်မထားဘူး။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်မျှဝင်ငွေအခွန်မျှအခွန်ရှောင်အခွန်မျှရောင်းအားအခွန်နှင့်မျှမစည်းစိမ်ကိုအခွန်ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံရှာဖွေတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်နိုင်ငံခြားဘဏ်အကိုင်းအခက်သာအခွန်ပေးဆောင်။ အခွန်ပြန် file ရန်မလိုအပျခရှိပါသည်။
တိုင်း LLC သည် Rak ထားခံရဖို့ရှိသည်မထားတဲ့စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများတင်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ ကော်ပိုရိတ်အခွန်ပြန်သို့မဟုတ်စာရင်းစစ်အကောင့်မလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။
ရှယ်ယာရှင်များ '' အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အားလုံးဒါရိုက်တာများများ၏အမည်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Rak မကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမအခွန်, privacy ကိုနှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ, တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူး, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုမြန်ဆန်မှတ်ပုံတင်ရေး, အနိမ့်ရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အင်္ဂလိပ်ကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောအင်္ဂလိပ်အားလုံးကိုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူပြောပြီသည်တစ်ဦးကယူအေအီး Rak လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမျိုးအစားများကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။